नयाँ युगको आगमन | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
नयाँ युगको आगमन
February 10, 2018 February 19, 2018 Dishanirdesh Kanchan0Comments
–थानेश्वर प्रसाद भट्ट । निर्वाचन परिणामपछि नेपाली जनजीवनमा नयाँ युगको आगमन अपेक्षित लाग्दछ । मुलुक यथास्थितिमा रहन सक्तैन । यो संभव नै भएन । अराजकता, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार लगायतका नकारात्मक प्रवृत्ति पराकाष्टामा पुगी सकेका हुनाले आमुल परिवर्तन नभई समाज गतिशील हुन सक्तैन । जसले जे गरे पनि हुने शक्तिवान् बाहुबली छ भने संविधान ऐन नियम कानून कुनै अर्थ राख्दैन । मालदीप्समा सर्वाेच्च अदालतले फैसला गर्दा संकटकाल लागु भई न्यायाधीश थुनामा परेका घटना प्रतिकात्मक हुन् ।
शक्ति पृथक्कीकरण भन्दै त्यसको उपहास मात्र गरिएको देखिन्छ । महाभियोग प्रकरणमा विधायिकाको अधिकार माथि अतिक्रमण भएर एक न्यायाधीशको आदेशबाट तत्कालिन प्रधान न्यायाधीशले पद बहाली गर्नु त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया कहीकतैंबाट नभई अराजक अवस्था सामान्य रुपमा लिइयो । कानून व्यवसायमा रहेको हुनाले घोर आश्चर्यमा पर्ने स्थिति भयो र संभवतः न्याय परिषद्को काम कारवाहीका सम्बन्धमा पनि अचम्मित पार्ने तबरको घटना पुनरावृत्ति हुन सक्छ । यस सम्बन्धमा समय अझै बाँकी हुदा दोश्रो समीक्षा विश्लेषण अभिव्यक्त हुने नै छ । ऐन कानून जसो भएपनि पालन गर्न कै लागि बनेका हुन्छन् । त्यसो भएन भने जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलरले वाइमर संविधानको आफुखुसी व्याख्या गरेझैं परिणाम पनि सोही अनुरुप आउनु कुनै अनौठो घटना हुने छैन ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँघर सम्म पु¥याएको दाबी निरन्तर भइरहेको हुनाले यसमा वास्तविकता कति छ त्यसको समीक्षा सान्दर्भिक हुनेछ । प्रदेश सरकारको मातहत स्थानीय सरकार नहुने, त्यस्तै संघ सरकार मातहत प्रदेश नहुने लागयतका द्वन्दात्मक स्थिति सन्निकट छन् । द्वन्द अराजकता स्वभाविक छ । त्यसमा कुनै तर्क गर्नपर्ने कारण पनि हुन सक्तैन । जहाँ बहुमत छ त्यसले केही साम्य पार्ने संभावना भएपनि विभिन्न दलका विभाजित मनस्थितिबाट जनसेवा भन्दा पनि तालाबन्दी, हड्ताल लगायतको डरलाग्दो स्थिति देखिन सुरु भइसकेको छ । अधिकार क्षेत्रका लागि भने द्वन्द पनि निश्चित छ ।
एक प्रदेशको अर्काे सँग सहकार्य हुन नसके त्यसबाट गृहयुद्ध हुन बेर लाग्ने छैन । त्यस्तै केन्द्र प्रदेशबीचको द्वन्द पनि घातक हुन सक्तछ । आत्म निर्णय सहितको पूर्ण स्वायत्तताका लागि दुई पटक सम्झौता, द्वन्द हिंसा भएकै हुन् । अब घातक बृद्धि हुन सक्ने लक्ष्यणको झलक मिल्न प्रारम्भ भइसकेको छ । भाषा, भेषभुषाका लागि व्यक्त घृणाले नेपाली समाजलाई कहाँ पु¥याउला भन्नै कठीन भएको छ । एकिकृत सद्भावपूर्वक बसेकोमा सामन्जस्य भत्काउने कुकृत्य प्रकट भइरहेका छन् । जाति, लिंग, भाषा, धर्म, संस्कृतिका नाममा एक अर्काप्रतिको घृणा भाव समय–समयमा निसंकोच प्रकट भएका दृश्य अब आश्चर्य नमान्नु पर्ने अवस्थामा पुगी सकेका छन् । कोही कसैप्रति अपनत्व, आत्मीयता, सद्भाव, राष्ट्रिय भावना राख्न र त्यसको सम्मान गर्न तयार देखिदैनन् । त्यसको ठीक विपरित महान संस्कृतिलाई तहसनहस पार्ने षड्यन्त्र प्रष्ट भइरहेका छन् ।
शासन सञ्चालकका लागि कर्मचारी अनिवार्य चाहिन्छन् तर ऐन कानूनको धज्जी उडाउँदै प्रत्येक दलका संघ संगठन रहेका हुनाले खटाएको ठाउँमा नै नजाने गएपनि काम नै नगर्ने, दलिय झोला बोकेर हिड्ने गतिविधि प्रत्येक क्षेत्रमा भइरहेका छन् । ट्रेड युनियन सौदाबाजी गर्न पाउने लगायतका संबैधानिक अधिकारबाट असफल राष्ट्रमा परिणत हुन धेरै समय कुर्न पर्ने छैन । भ्रष्टाचार पराकाष्टामा पुगी सकेको छ । शिविरका अरबौं घोटाला लोकमानका गोप्य तहवीलमा सुरक्षित छन् भनिन्छ । गोपाल खड्का, चुडामणी शर्मा, साझाका हाकिम स्वयं सरकारी मन्त्रीहरु र हुदाहुदा गोविन्द के.सी.का शब्दमा प्रधान न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको मुल भन्ने सम्मका सञ्चार माध्यम सामान्य होइनन् । प्रमाण नै नचाहिने प्रष्ट देखिने विषयमा पनि कुनै कारवाही नहुनु, अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत नेपाल शब्द नै भ्रष्टाचारको पर्याय मानिनु, लाखौं पनि होइन करोडका सीमा नाघ्दै एउटा सामान्य कर्मचारी अरबौं कमाउन सक्ने देखिदा पनि हलचल हुदैन । आम सर्वसाधारण सिटामोल समेत नपाउने, यी ब्वाँसाहरुका लागि करोडौं रकम राज्यले खर्च गरी दिनुपर्ने, दशौं हजार सुरक्षाकर्मी व्यर्थमा भ्रष्टाचारी सुरक्षाका निम्ति खटिएका समाचारबाट कानून र लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना मरुभुमिको मृगतृष्णा बाहेक अरु के नै हुन सक्ला ? नेपाली युवा युवती दासत्वको जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् ।
खान औषधी नपाएर मरी रहेका समाचारहरुका बीच खाद्य सम्प्रभुता, स्वास्थ्य, रोजगार ग्यारेन्टी जस्ता हास्यास्पद लवजहरु नयाँ युगको आगमन पर्खि रहेको स्पष्ट देखिन्छ । कांग्रेस धराशायी बन्यो, के अब वामपन्थीको पालो त आउने होइन ? स्वराजको आगमन आधी पूर्वको सद्भाव त हुने छैन ? यसै सँग नयाँ युगका तार जोडिए जस्ता देखिन्छन् । नेपाल आमाको अस्मिता खतरामा पर्ने दुःखद लक्ष्यणबाट समयमा नै जागरुक नभए ब्वाँसाहरु पनि कति बच्लान् ?
← नेपाल आमाका धड्कन जगत गुरु
७ नं. प्रदेशको सुङरकोट, एक झलक →